5 waxyeelo cabsi leh Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
En Waqtiga Halloween waa caadi in la isticmaalo Photoshop si loo abuuro sawirro madadaalo oo u dhigma mawduuca dabaaldegga. Dareenkan, maanta waxaan soo bandhigi doonnaa 5 Casharro Photoshop si loo abuuro saameyn cabsi leh.
Tababar Indho Madoow. Kani waa casharro aad ku baranayso sida loo abuuro indhaha sharka ah sawir caadi ah. Casharradu waxay ka kooban yihiin dhowr tallaabo, taasoo ka dhigaysa mid aad u fudud in la sameeyo xitaa dadka isticmaala layliska.
Tabobar taallo. Casharkaan waxaa lagu baray sida loo abuuro saameynta taalada sawirka caadiga ah. Si tan loo gaaro, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo nabar gaar ah oo lagu bixiyo casharrada, marka lagu daro isticmaalka qalabka qalinka.
Gubashada saamaynta. Marka laga hadlayo casharradan, waa tan sida loo mariyo saameynta gubashada wejiga, taas oo iyaduna ay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo qaab gaar ah oo lagu bixiyo soo dejinta faylka ZIP Casharradu waa wax iska fudud maadaama ay ka kooban tahay oo keliya 5 talaabo oo aad u fudud oo lagu sawiray sawirro.
Tababbarka saamaynta Zombie. Kani waa casharro uu abuuray DeviantArt isticmaale wuxuuna muujinayaa sida loo abuuri karo sawir zombie ah. Casharradu dhab ahaantii waa hal sawir oo si toos ah loogu soo dejisan karo si loogu sahlo.
Saamaynta cirfiidka. Kani waa casharro aad ku abuuri karto dhalanteed waji cirfiid ah, dhammaan 10 tallaabo oo sahlan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 5 saameyn cabsi leh Photoshop
5 Mawduucyada WordPress ee goobaha ciyaaraha